သုညပစ္စည်းကိရိယာနှင့်အတူ - အထူးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ရီးရဲလ်-ဘဝလှုပ်ရှားမှု-သူရဲကောင်းများရော့ခ်ခက်အဖွဲ့များထွင်းနှင့်မစ်ရှင်သင့်ဖြစ်မှုကိုထိန်းသိမ်းပါမှညာ Now ကိုအသုံးပြုခြင်းနေသောယခင်ကက Non-ထုတ်ဖော် System ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ!
နယူးအပြုအမူသုတေသနထိုကဲ့သို့သောပုံသဏ္ဍာန်တည်ရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထိုသင်တို့သည်နောက်ကိစ္စသင်သည်အခုအချိန်မှာဘယ်လောက်အရပ်ရှည်ရှည်, တိုတောင်းသော, အဆီ, ပါးလွှာလူငယ်သို့မဟုတ်အဟောင်း, အာလဖအမျိုးသားအဆင့်အတန်းမှီနိုင်သလား ...
အခုတော့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, သငျသညျသူတို့အဘို့အကျော်ကြားဖြစ်ကြ၏အာလဖအမျိုးသားအလောင်းတည်ဆောက်ရန်အစစ်အမှန်ဘဝအထူးအော်ပရေတာကအသုံးပြုအတူတူယခင်က Non-ထုတ်ဖော်နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိသည် ...
သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် Holding ကုမ္ပဏီသင်ဟာသို့ပြန်သွားရန်၏အသံတိတ်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲသင့်အမျိုးသားသားဦးအရာကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကကောင် မှစ. ရှိပါသလား?
မင်္ဂလာပါကျနော် Todd သိုးသငယ်, SWAT အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များနှင့်နည်းဗျူဟာကြံ့ခိုင်ရေးအတိုင်ပင်ခံပေါ့။ ထိုအခါငါယောက်ျားသည်ယနေ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြင်းထန်ပြီးအလွန်အစစ်အမှန်ပြဿနာအကြောင်းကိုပြောပြရန်မလိုအပ် ...
သငျသညျအပြည့်အဝဒီကိုလက်ခံသည်အထိသင်အလိုရှိကြသည်နှင့်ထိုက်ခန္ဓာကိုယ်အောင်မြင်ရန်မည်မဟုတ်။ သို့သျောလညျး, ထယခုတိုငျအောငျ, တစ်ဦးဝမ်းကိုခွဲ, ကြွက်သားကောင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သင်၏စိတ်ပျက်သင့်ရဲ့အမှားဖြစ်မထားပါဘူး ... ဒါကြောင့်အားလုံးခေတ်သစ်ယောက်ျားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီတစ်ခုအကြပ်အတည်းမှဆင်းလာ - လောကတွင်ဆရာမများ ...
ငါရက်စက်စွာရိုးရိုးသားသားဖြစ်သွားတယ် ... ငါအချို့သောယောက်ျားတွေအခုဖတ်နေကိုရပ်တန့်စေခြင်းငှါ, ငါသိ၏ ...
ဤသူသည်သင်တို့တော့လို့ပါလျှင်, သင်ပဲတစ်မိနစ်အတွင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါလိမ့်မယ်နည်းလမ်းများပြောင်းလဲ3အစွမ်းထက်ကောင်အတွက်လုံလောက်သောယောက်ျားမဟုတ်သောကြောင့်အကြောင်း, အဆင်ပြေပါသည်။ ဤရွေ့ကားသင်အလိုရှိကြသည်နှင့်ထိုက်ကြွက်သား, ကျောက်ခက်များနှင့်ပိန်ကောင်များ၏ကြင်နာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ချင်တယ်ဆိုရင်သင်သိရမညျ3အရာဖြစ်ကြ၏။
ဒီကိစ္စကို၏အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် ... သင့်ရဲ့ယောကျ်ားဘဝတိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအချက်များ, ယောက်ျားကိုလူဦးရေရဲ့တစ်ဦးစိုးရိမ်ဖွယ်ရာ "Sissi-fication" ဖြစ်စေတဲ့နေကြသည်။ ယောက်ျားကပိုကျအောကျခံဖြစ်လာရသည်။ နှင့်အမျိုးသားလိင်ဟော်မုန်း ... "အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲ" လို့တစ်ချိန်ကဂုဏ်ယူအထီးကောင်နှိမ်နင်းလျက်ရှိသည် ...
ဒါကပဲကျနော့်အမြင်မဟုတျပါဘူး ... သုတေသနယောက်ျားရဲ့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုသူတို့နှစ် 20 အကြာခဲ့ကြသည်ထက် 20 ရာခိုင်နှုန်းနိမ့်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ!
သို့သျောလညျးအားကစားရုံအသင်းဝင်, ကာယဗလမဂ္ဂဇင်းနှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းအားကစားနှင့် P90x ကဲ့သို့ "ပြင်းထန်သော" လေ့ကျင့်ခန်းအစဉ်အဆက်ထက် ပို. လူကြိုက်များကြသည်။ ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်လူ Boob နှင့်ပျော့ပျောင်း, ဂျပိန်-အဆီအထီးအလောင်းတွေယခုစံရှိပါသလဲ
လူကြိုက်အများဆုံးကြွက်သားအဆောက်အဦသို့မဟုတ်ကိုယ်အလေးချိန်အစီအစဉ်များကိုတကယ် ... ပြဿနာကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနှင့် ပို. ပင်သင့်ရဲ့အရေးအပါဆုံးအထီးလိင်ဟော်မုန်းဖိနှိပ်သောကြောင့် ...
သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လောကတွင်ဆရာမများမှသားကောင်လဲသေကြပြီသူကိုယောက်ျား၏ဦးရေသန်းတဝတည်းဖြစ်ကြ၏လျှင်, သမ္မာတရားကိုသင်တို့အားလကျခံဖို့အခုအချိန်မှာဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သောကြောင့်: သင်မပါလျှင်, သင်ထိုက်ဦးခေါင်း-လှည်ကောင်တည်ဆောက်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ "လူနည်း" feeling, သင့်ပျော့ပျောင်းသောကိုယ်ခန္ဓာ၏ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ နှင့်အညီ, သငျသညျကိုတောင်သင်ပိုမိုထွက်အလုပ်လုပ်နှင့်ဒီထက်နည်းကိုစားသကဲ့သို့, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပျော့ပြောင်းပြီးနှင့်ပျော့ပြောင်းပြီးရဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သောအနုတ်လက္ခဏာဟော်မုန်းကွင်းဆက်ထဲမှာပိတ်မိနေပါစေခြင်းငှါ ...
သို့သော်ယခုသင်ယနေ့သောသူကဲ့သို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုသတိထားနေနှင့်မည်ကဲ့သို့သူတို့ကတခြားယောက်ျားလေးစားပါတယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဘို့သင့်ရှာပုံတော်ချိ, နှင့်အမျိုးသမီးသဘာဝကျကျဖို့ဆွဲဆောင်နေကြတယ်, ဒါကြောင့်သင်ကအသေးစိတ်အစီအစဉ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အချိန်ရဲ့ဖွင့် အလွယ်တကူအာလဖ Shape တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာသူတို့ရဲ့အလောင်းစောင့်ရှောက်သောယောက်ျား၏ကို select လုပ်ပါအုပ်စုတစ်စုကအသုံးပြု ...
ဒီတော့ရဲ့နောက်ဆုံးမှာပိန်ကြုံသော, သွေးကြောတည်ဆောက်ဖို့ကအနီး-အင်အားစိုက်ထုတ်စေသည်ပထမဦးဆုံးအထူးတပ်ဖွဲ့နည်းဗျူဟာလေ့ကျင့်ရေးအစွန်အဖျား, သင်၏အထီးသားဦးအရာကိုကြောင်းကြွက်သားခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့မရကြကုန်အံ့ ...
သုညပစ္စည်းကိရိယာနှင့်အတူရော့ခ်ခက်ကြွက်သား Add စေရန်မည်သို့
alpha Shape လျှို့ဝှက်ချက် # 1
သင်ပြုသွားနေပထမဦးဆုံးအရာကြွက်သားများဟာအလွန်တိကျတဲ့ကြင်နာပေါ်ထုပ်ပိုး start ဖြစ်ပါတယ် ...
Listen: ကျနော်တို့မဆိုကြွက်သားပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး ...
သငျသညျပျက်ကွက်ကာယဗလနှင့်အားကစားရုံ-ကြွက်ဘာတစ်ခုမှပျားအပေါ်တွေ့မြင်အသုံးမကျ, puffy နှင့်ယာယီကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်း၏အမှားလုပ်မထားပါနဲ့ ...
အဲဒီအစား, သငျသညျကမင်းသမီးကိုဆွဲဆောင်ဘို့ဖြစ်၏အဖြစ်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေချတာအဖြစ်အသုံးဝင်သောရဲ့ခက်ခဲကျောက်, သွေးကြောနှင့်ဖျက်စီးကြွက်သားချင် ...
ဤသည်က sarcoplasm hypertrophy ကိုခေါ် ... ထိုရလဒ်နည်းနည်း ADDED ခွန်အားနှင့်တစ်ဦး puffy ကောင်ဖြစ်ပါတယ် ...
သို့သော်အာလဖ Shape Effect ဒီ myofibrillar hypertrophy လို့ခေါ်ပါတယ် ... အမှန်တကယ်ကြွက်သားမျှင်များ၏အရွယ်အစားနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်ရန်လိုအပ်သည် ...
ဤရွေ့ကား, ရ ... ကြွက်သားထုထည်၏ဤတိကျတဲ့အမျိုးအစားအားကစားရုံကိုသွားမလိုအပ်ပါဘူးတည်ဆောက်ခြင်း ...
ငါခဏအတွက်ထုတ်ဖေါ်လိမ့်မယ်အရာ - - ငါ့အပစ်မှတ်အာရုံစိုက်ကြွက်သား™ technique ကိုအတွက်မဟာဗျူဟာကျကျရွေးကောက်တော်မူ bodyweight လေ့ကျင့်ခန်းများ၏အလွန်တိကျတဲ့ sequence ကိုတကယ်သင်လိုအပ်သည့် steely ကြွက်သားပေါ်မှာထုပ်ပိုးရန်အလျင်မြန်ဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ...
သင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အတူယောက်ျားအရမ်းလေးစားမိပါတယ်ရန်, သဘောသဘာဝ hardwired လူသားမြားသညျကိုမွငျ ...
ထိုသို့သင်ဒီတင်ပြချက်အတွက်အထူးတပ်ဖွဲ့လေ့ကျင့်ခန်း shortcuts တွေကိုနှင့်အတူတည်ဆောက် ... ဒီတော့စာဖတ်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်မည်ပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့ ...
alpha Shape လျှို့ဝှက်ချက် # 2
အဘယ်ကြောင့်ဆုံးရှုံးဆီ Accelerator ကြွက်သား Gain
အများစုမှာကြွက်သား "ဂုရု" နေဆဲသင်သည်ကြွက်သားရဖို့ FAT အပေါ်ထားကြပြီထင်တယ် ...
သငျသညျတိကျစွာအဆိုပါလေ့ကျင့်ခန်းနည်းစနစ်များအသုံးပြုသောအခါ ... သင်သည်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ရန်အကြောင်းကိုအတုအယောငျဖြစ်ပါတယ်မသာ, သင်ကိုလည်းတစ်ချိန်တည်းမှာအဆီဆုံးရှုံးရသောအခါကြွက်သားပေါ်မှာထုပ်ပိုးဖို့အမှန်တကယ်ပိုမိုလွယ်ကူမယ့် ...
နေ့တိုင်း, သင် xenoestrogens ကိုခေါ်တစ်ခုခုအားဖြင့်တရစပ်နေကြသည် ...
နေ့စဉ်ပစ္စည်းများရာပေါင်းများစွာမှာတွေ့ရှိ - - ဤသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းများမှာသင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအမျိုးသမီးလိင်ဟော်မုန်း estrogen တူတဲ့ကြောင်း ...
ထိုအကြောင်းကိုသင်၏ testosterone ဟော်မုန်းသတ်ဖြတ်မှုများ ...
သို့သျောလညျးဒီမှာကြောက်စရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်း၏နာမ၌အဆီပေါ်တွင်တင်ပါစေလျှင်, သင်၏အဆီဆဲလ်တွေတကယ်သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုပြီး "endogenous" အီစထိုဂျင်ထုတ်လုပ် ...
ဝမ်းနည်းပါတယ်, သင်မူကားနှစ်ခုမျက်နှာစာပေါ်အမျိုးသမီးလိင်ဟော်မုန်းဆန့်ကျင်နေတဲ့စစ်တိုက်အနိုင်ရလို့မရပါဘူး ...
ငါသည်ဤဟောင်းဓာတ်ပုံတစ်ပုံထဲမှာရှိခဲ့တူသောထိုအခါရလဒ်လူ Boob embarrassing ဖြစ်ပါတယ် ...
ပိန်ကြွက်သားပေါ်မှာထုပ်ပိုးစဉ်မရှိသေးပါဖြတ်တောက်အစွန်းအနည်းငယ်သာ-လူသိများတပြိုင်တည်း Lipolysis ယလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အစာအာဟာရအခြေခံမူကိုအသုံးပြုပြီးပါကအဆီကွာဖြတ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ် ...
... သင့်ရဲ့ testosterone ဟော်မုန်းသဘာဝအတိုင်းကောင်းကင်ပြာမြင့်မားရိုက်နေစဉ်, သင့်အီစထိုဂျင်ချက်ချင်းမှန်ထုပ်စေ ...
alpha Shape လျှို့ဝှက်ချက် # 3
"Beta ကိုအမျိုးသား" ဟော်မုန်း Cycle ရှောင်ကြဉ်ပါ
သို့သျောလညျးချက်ချင်းသင့်ရဲ့ testosterone ဟော်မုန်းဦးသေဆုံးတပိုပြီးကြီးမားအမှားရှိတယ် ...
သငျသညျ testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုမဟာ-ရန်သူရှိပါတယ် ... cortisol လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်း, ကြည့်ရှုပါ။ cortisol သင့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ် ... ထိုသို့တက်သောအခါ testosterone ဟော်မုန်း plummets ...
လူ့အပြုအမူသို့အစွန်းသုတေသနဖြတ်တောက်ခြင်းအားလုံးအာလဖအထီးတသမတ်တည်း testosterone ဟော်မုန်းမြင့်မားခြင်းနှင့် cortisol ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ဝင်စားကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထိုအရိုးရှင်းစွာကိုယ့်ကိုယ်အဖြစ်အနည်းငယ်သာ2အဖြစ်မိနစ်အဘို့ "beta ကိုအထီး" ကိုယ်ဟန်အနေအထားနှင့်အခြားအားနည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်ပြမှုများကိုဖော်ပြရန်ခွင့်ပြုခြင်းအားဖြင့်သင့် cortisol ပမာဏမြင့်တက်ပေးပို့နှင့်သင့် testosterone ဟော်မုန်းသတ်လိမ့်မည်တကား! ...
သို့သျောလညျးသငျသညျပြုမူကာအာလဖအမျိုးသားနဲ့တူခံစားရသောအခါသင်အမှန်တကယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်, အဆင့်မြင့်လိင်အယူခံ testosterone ဟော်မုန်းတိုးလာနှင့်ထို့ထက် ပို. ...
ငါအသေးစိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်အကြောင်းကိုပေါ့သောငါ၏စနစ်, အထူးသသင့်အာလဖအခြေအနေပြုမူခြင်းနှင့်ပရောဂျက်ကိုသင်ခံစားမိစေသည်အတိအကျအာလဖ Shape Effect ™၏အားသာချက်ယူအာမခံဖို့ဒီဇိုင်း, ဒါကြောင့်သင်ထပ်ဆိုး beta ကိုမှသားကောင်ကရြောကျဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ် -male သံသရာကိုထပ် ...
သင်တစ်ဦးအခန်းထဲသို့လမ်းလျှောက်တိုင်းအချိန်, မျက်စိသဘာဝကျကျသင်တို့ဆီသို့ရေးဆွဲနေကြပါတယ် ...
သင့်ရဲ့အထီးလိင်ဟော်မုန်းများနှင့်ဇီဝြဖစ်သင်န်းကျင်သည်အခြားလူကိုပင် junk အစားအစာထက်ပို စား. , ဘယ်တော့မှအဆီတစ်အောင်စကိုရရှိနိုငျကွောငျး, ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့ဖြစ်ကြသည် ...
တစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဆက်ဆံရေးအတွက်, သင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသံလိုက်နှင့် virility သင်၏အသက်တာ၏စိတ်ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံးလိင်ကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ် ...
ဤရွေ့ကား, ဖြစ်ချင်ဇောမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြနေသည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ပါပဲ။ ထိုသို့အားလုံးအသေးစိတ်အစီအစဉ်ကိုလိုက်နာရန်လွယ်ကူသော၌သင်တို့အဘို့အထွက်စာလုံးပေါင်းရဲ့ ...
အခုဆိုရင်အရမ်းတစ်ခုအားသင်ရီးရဲလ်ဘဝကအထူးအော်ပရေတာများ၏ Elite စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် Alpha ကောင်ဖူးနိုင်သလား
အဆိုပါ SpecForce အာလဖစနစ်
တစ်ဦးရီးရဲလ်-ဘဝကအော်ပရေတာဖြင့် Created အဆိုပါသာလျှင် Tactical ကြံ့ခိုင်ရေးစနစ်
တစ်နှစ်တာက Round Alpha-အမျိုးသားကောင်, အခြေအနေ & ယုံကြည်မှုအဘို့
ယခုတွင်ငါသည်တစ်ခုအထက်တန်းလွှာ SWAT အဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင်ပေါ့, နှင့်ကမ္ဘာအတွက်ထိပ်တန်းနည်းဗျူဟာကြံ့ခိုင်ရေးကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသော်လည်း, သင်တို့ကိုငါထက်တကယ်အဘယ်သူမျှမကွဲပြားဘူး, ကိုသတိရပါ: ငါရှာတွေ့မှအတင်းအကျပ်သူ့ကောင်လေးပေါ့ တစ်ကယ့်ကိုထိရောက်တဲ့စနစ် ...
စနစ်မရှိရင်: ငါမခိုင်မြဲ, မပိုသူရဲနှင့်မျှမကပိုဆွဲဆောင်မှုလမ်းပေါ်မှာမဆိုအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်ထက်ဖြစ်ခဲ့သည် ...
ယခုတွင်လျှို့ဝှက်အထူးတပ်ဖွဲ့များအသိုင်းအဝိုင်းပြင်ပရှိယောက်ျားတွေမှပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အမရရှိနိုင်တူညီသည့်စနစ်, သငျသညျငါ့ကိုတူပုံမှန်အစည်းအဝေးယောက်ျားတွေခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ် ...
သိပ္ပံနည်းကျအမျိုးသမီးများနှင့်သင်ကြီးစိုးအထီးများမှာအခြားလူတို့အား signal သက်သေပြလျက်ရှိသည်သောအထီးလိင်ဟော်မုန်းတက်ဂျက် ...
ကြီးမားသောဖွံ့ဖြိုးမာကျောက်များနှင့် steely အားကောင်းတဲ့လက်နက်နှင့်ပခုံး, အားကစားခန်းမထဲမှာနာရီဖြုန်းတစ်ခုသို့မဟုတ် puffy ကာယဗလမယ်ကောင်အတူတက်အဆုံးသတ်ရေးမပါဘဲ ...
ယုံကြည်မှုသည်သင်၏အာလဖ Shape ™လေးစားမှုနှင့်လေးစားငှါငါပညတ်မည်ကို သိ. မဆိုအခန်းထဲသို့လမ်းလျှောက်ဖူး ...
နောက်ဆုံးတော့ "လူနည်း" ဖြစ်ခြင်း၏ခံစားချက်နောက်ကွယ်မှထားခဲ့ပါ ...
ဒါကြောင့်သင်ထိုက်ခိုင်ခံ့သော, အစွမ်းထက်, ပိန်ကောင်တည်ဆောက်ခြင်း၏ထိန်းချုပ်မှုယူနိုင်ပါတယ် ...
တနည်းကား, ငါစိတ်ဓာတ်ကျ, ဂျပိန်-ဆီဥနှင့် directionless ကနေသွားကြဖို့ ... ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးအထက်တန်းလွှာ SWAT ယူနစ်များထဲမှတစ်ဦးသည်ဝမ်းခွဲ, ကျောက်ခက်အာလဖအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဖို့အသုံးပြုတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့အဘို့အရှာနေအားလုံးအခြားယေဘုယျကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းအစီအစဉ်သည်ဆိုပါက ... [မှာအားလုံးအလုပ်လုပ်တယ်လျှင်သင်ပြီးသားကိုသိတဦးတည်းသာ ... တစ်ဦး puffy, unimpressive ခန္ဓာကိုယ်မှဦးဆောင်]
သို့မဟုတ်သင်အနည်းငယ်တိုတောင်းကိုင်တွယ်ဖြစ်သော်လည်း, အလွန်ခက်ခဲတဲ့လေ့ကျင့်ခန်း, အပတ်တိုင်း ... [နှငျ့သငျ, သငျသညျတခုအာလဖအမျိုးသားခန္ဓာကိုယ်ရှိသည်ဖို့ထိုက်မနိုင်လျှင်, ရဲ့ရိုးသားပါစေ ... ] မနိုင်လျှင်
သင်တို့ကိုဖွင့်လျှင်, SpecForce အာလဖသင်တို့အဘို့မဟုတ်ပါဘူး ...
ဒီစနစ်လမျးဖွောငျ့တုတ်ကျင်းတွေထဲကနေ ... အစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည် ... Created နှင့်စစ်မှန်, စစ်မှန်သောဘဝအထူးအော်ပရေတာကအသုံးပြု ...
ဒါဟာခက်ခဲတဲ့ရဲ့ ... ထိုအခါမှသာနောက်ဆုံးတော့ကောင်းသောများအတွက်ရီစရာယလေ့ကျင့်ခန်း gimmicks, အသုံးမကျ, စျေးကြီးဖြည့်စွက်ခြင်း, စကားမပြောနိုင်သော, Sissi အစားအစာကိုပယ်ရန်အဆင်သင့်နေသောလူရဲ့ ...
ဒါဟာအချို့ Lululemon ကဒီဇိုင်းအခြားအတုဖြစ်သော "က Black Ops" ယလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်အထူးအော်ပရေတာဖြစ်တူရဲ့အဘယ်အရာကိုမျှမစိတ်ကူးရှိသူပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာကမကထကျိန်းသေမဟုတ်ပါ ...
ထို့နောက် SpecForce အာလဖသင်တို့အဘို့ပဲ "တစ်ဦးက" စနစ်ကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ legit အော်ပရေတာကဒီဇိုင်းတစ်ခု program ကို ... သင်အမှန်တကယ်စာချုပ်လိုပါကနှင့်နည်းဗျူဟာကြံ့ခိုင်ရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူအသိအမှတ်ပြုဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့တစ်ခုတည်းသောသည့်စနစ်ရဲ့ ...
အဆိုပါ SpecForce အာလဖအစီအစဉ်ကိုအတွင်းပိုင်းကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနီးပါးတိုင်းအထူးတပ်ဖွဲ့များအော်ပရေတာများ၏တစ်နှစ်ပတ်လုံးရော့ခ်ခက်ခဲကောင်များအတွက်တာဝန်ရှိအတိအကျ 7-နေ့ကလေ့ကျင့်ရေးသံသရာ ...
အဆိုပါကိုယ်ပျောက်ပစ်မှတ်တပ်ဖွဲ့များသင့်ကိုယ်ပိုင် bodyweight သုံးပြီးအလျင်အမြန်ကြွက်သားကြီးထွားဝမ်းခွဲကြောင်းကြွက်သား™ technique ကိုအာရုံစူးစိုက် ...
အဆိုပါတိကျတဲ့သတ်မှတ်ချက်နှင့်သိသိသာသာလျင်မြန်စွာအဆီဆုံးရှုံးမှု accelerates ကြောင်းကိုသင်၏သဘာဝအလျောက်ကြီးထွားဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ကိုယ်စားလှယ်အစီအစဉ် ...
အတိအကျအဘယ်အရာကိုများနှင့်ရသောအခါစားရန်, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Marcronutrient ကိုယ်ရေးဖိုင်အပေါ်အခြေခံပြီး, အကောင်းဆုံးကိုသင်၏ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ ...
... ဒါကြောင့်ဘီယာကိုမသောက်နှင့်သင်၏ကောင်သို့မဟုတ် performance ကိုစွန့်ခြင်းမရှိဘဲဘာဂါနဲ့ပီဇာနဲ့တူသူရဲအစားအစာများကိုစားရန်ဒဏ်ငွေင်ဘာဖြစ်လို့အပါအဝင် ...
ချက်ချင်းကိုသင်ပြုမူခြင်းနှင့်ပင်တစ်အာလဖအမျိုးသားကဲ့သို့အထင်, ကြည့်ရှုစေနည်းစနစ် "ပြောင်းလဲ"2spec ops အတွေးအခေါ်တွေနဲ့အာရုံစူးစိုက် ...
တိုင်းတစ်ခုတည်းအဆီလောင်ကျွမ်းမှုကို, အ SpecForce အာလဖအာဆင်နယ်အသင်းအတွက်ကြွက်သားအဆောက်အဦစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများစုံလင်သောကွပ်မျက်အပေါ်အသေးစိတ်ဗီဒီယိုကိုနည်းပြ ...
အတိအကျအစဉ်အဆက်တစ်အားကစားရုံထဲမှာခြေလျင်နင်းမရှိရင် ... ယောက်ျားတွေသလောက်အကြိမ်9အဖြစ်၎င်းတို့၏ bodyweight ဝန်ရုတ်သိမ်းပေးရန်အသုံးပြု functional ဖြစ်စေတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ spec ops ၏ကြင်နာတည်ဆောက်ဖို့ဘယ်လို ...
သင်လေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက်နာရီ၌သင်တို့၏အထီးလိင်ဟော်မုန်းတစ်ခုအကောင်းဆုံးတိုးတက်မှုရနိုင်ရေးအတွက်တိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီလုပ်နေဖို့လိုအဘယ်အရာကို ... နီးပါးအသီးအသီးကဒီတက် messes ...
အစဉ်အဆက်ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ဤစစ်မှန်နည်းလမ်းများ - ငါလုပ်-ယုံကြည်အထူးတပ်ဖွဲ့လေ့ကျင့်ခန်းခေါက်-off နှစ်ပေါင်းလူတွေထားပါသည်ခဲ့ကြကြောင်းအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး - နောက်ဆုံးတော့ယနေ့သင်မှရရှိနိုင်ပါ ...
ဒီမှာအဘယ်အရာကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ် MMA မှတိုက်လေယာဉ်အလန် Belcher ပြောခဲ့ရတယ် "ဒီ Talent:" ရဲ့ ...
သင် Ultimate အာလဖအမျိုးသားခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးရန်အစီအစဉ်အတွက်ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင် - SpecForce အာလဖသငျသညျမိုးလေသိရသည်။ ဤရွေ့ကားလေ့ကျင့်ရေးသဘောတရားများကိုငါတစ်ဦးရန်ပွဲအတွက်သို့မဟုတ်ငါပြီးပြည့်စုံသောအာလဖ Shape အတွက်အမြဲဖြစ်ကြောင်းကိုအဆိုပါချွတ်ရာသီအတွက် prepping ငါဖြစ်စေ, jacked နှင့်အဆင်သင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးစောင့်ရှောက်လော့။
အလန်ကဲ့သို့ကမ္ဘာတဝှမ်းယောက်ျားထောင်ပေါင်းများစွာ၏ယခုဤအကိုယ်ပျောက် SpecForce အာလဖနည်းလမ်းများသုံးပြီးအာလဖ Shape Effect ဖန်တီးသောအတိအကျရော့ခ်-ခက်, ကြွက်သား, သွေးကြောများနှင့်သတ်မှတ်ထားသောကောင်ကိုတည်ဆောက်လေပြီ ...
ဘယ်သူတို့အဖြစ်အနည်းငယ်သာ 20 အဖြစ်မိနစ်ထွက်အလုပ်လုပ်နေကြပြီး, နေတုန်းပဲဘီယာသောက်ခြင်းငှါ၎င်း, လူတစုံတယောက်အစားအစာအတွက်ဘာဂါ, ပီဇာနှင့်အခြားအဓိကတူသောအစာကိုစားနိုင်ပါတယ်စဉ်းစား, အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည် ...
အခုတော့သငျသညျ SpecForce အာလဖအကုန်အကျလိမ့်မည်ကဲ့သို့သောစနစ်ကအဖြစ်အစွမ်းထက်ယုံကြည်စေခြင်းငှါ ...
စစ်မှန်အထူးတပ်ဖွဲ့များ၏ဤကြင်နာသင်တန်းနှင့်အစားအစာသတင်းအချက်အလက်ရှေ့တော်၌ထိုအသိုင်းအဝိုင်းပြင်ပရှိရရှိနိုင်ပါဖူး ... ပြီးတော့ငါအမှနျကယူလာအတွက်အန္တရာယ်ယူပြီးတယ် ...
သို့သျောလညျးကတစ်ချိန်ကဂုဏ်ယူအထီးကောင်များ၏ sneaky လောကတွင်ဆရာမများကြည့်ဖို့ငါ့ကိုဒေါသထွက်စေသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ...
ငါကလူအများမတတ်နိုင်ဖြစ်လာမီ, တတ်နိုင်သမျှအများအပြားလူတို့လကျသို့ SpecForce အာလဖရချင် ...
ပထမဦးစွာငါသည်သင်တို့ကိုယနေ့အရေးယူတဲ့အခါမှာသင်ဟာကိုယ့် SpecForce အာလဖရတဲ့ကြသည်မဟုတ် ... အိတ်ထဲကကြောင်ပါစေရန်ရှိသည် ...
ငါသည်လည်းသင်တို့ကိုပင်ပိုမြန်နေတဲ့ဝမ်းကိုခွဲအာလဖကောင်တည်ဆောက်ရန်ကူညီပေးဖို့, $ 215 တန်ဖိုး, သင်တာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့နှစ်ခုလူသတ်သမားဆုကြေးငွေပေးကမ်းတယ် ...
သင်၏ပဌမအခမဲ့ဆုကြေးငွေဆုကြေးဇူးကိုယနေ့ 7-Day ကို testosterone ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပါတယ် ...
သင်သည်သင်၏သဘာဝက testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှုန်းကိုမြင့်တက်နိုင်အီစထိုဂျင်ကြီးစိုးနောက်ကြောင်းပြန်သောဘုံဟင်းသီးဟင်းရွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်အတွင်းပိုင်း ...
ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုလွန်ကဲကဲ virility မြှင့်တင်ရန်အသုံးပြုခဲ့တဲ့တပင်လယ်စာ ...
သည်လေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက်သောက်သုံးသင့်ကြောင်းအခုအချိန်မှာသင့်ရဲ့ရေခဲသေတ္တာထဲမှာထိုင်လျက်င့်သော "ဟို" အင်အားကြီး ... ...
အဆိုပါတစ်ခုတည်းသောအမှန်တကယ်မြင့်မားတဲ့ testosterone ဟော်မုန်းကိုပံ့ပိုးသောဖြည့်စွက်ခြင်း, အရာ pricy ဖြည့်စွက်စုစုပေါင်းလိမ်လည်မှုဖြစ်ကြောင်း ...
လူအမြားကိုပိုမိုဝှက်ထားသောအစာအာဟာရနှင့်ဖြည့်စွက်နည်းစနစ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့သဘာဝကျကျ testosterone ဟော်မုန်းမြှင့်တင်ရန် ...
အခုဆိုရင်သင့်ဒုတိယအကြိမ်အခမဲ့ဆုကြေးငွေယနေ့သင်တို့ကိုတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်သင့်ရဲ့ကျောက်ခက်အာလဖကောင်ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်အာမခံသောကိုယ်ပျောက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ် ... ဒီရ ...
ဒါဟာက Black Ops MacroFlex အစားအသောက် App ကိုဖွင့် ...
မည်သည့်စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ထဲကနေ, သင့် app ကိုအကောင်းဆုံးကြွက်သားအမြတ်သို့မဟုတ်အဆီဆုံးရှုံးမှုများအတွက်စားရန်အတိအကျသင်သည်အဘယ်သို့ပြောလိမ့်မည်ဟု ...
ထို့နောက်ရုံသင် logbook built-in နှငျ့သငျအပေါငျးတို့သ guesswork ဖယ်ရှားပစ်ပါလိမ့်မယ်စားသောက်သောအရာကိုမှတ်တမ်းတင် ...
ထိုအခါအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အကြှနျုပျ၏ MacroFlex အစားအသောက်များတွင် Sissi ငှက်အစာကိုစားရန်သင့်အားအတင်းမပါဘူးဖြစ်ပါတယ် ...
တကယ်တော့သင်ကနေသမျှကာလပတ်လုံးသင့်ရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသောအတွင်းကိုက်ညီအဖြစ်, သင်ချင်သမျှကိုစားနိုင်ပါတယ် ...
ငါ spec ops ကောင်လေးတစ်ဦးဘာဂါနှင့်တစ်ဦးဘီယာကိုဆင်းဖွင့်တစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ပါဘူး, Listen ...
ဒီ app ကို $ 197 အဘို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကိုရောင်းပါလိမ့်မည် ... ထိုအခါငါကမိတ်ဆက်ပါတယ်တိုင်းယောက်ျားတစ်ယောက်က $ 500 သို့မဟုတ် ပို. တန်ဖိုးရှိမယ့်ပြောတယ်ထားပါတယ် ...
သို့သျောလညျးဒီကန့်သတ်အချိန်အထူးကမ်းလှမ်းမှုစဉ်အတွင်း, သင့်ကိုငါအမိန့်လုံးဝအခမဲ့နှင့်အတူကအပါအဝင်ပေါ့ ...
အခုဆိုရင်: သော်လည်းအဲဒီနှစျခုလူသတ်သမားဆုကြေးငွေဒီနေ့သင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကြောင်းအနီးပေးဆောင်မဟုတ်ပါဘူး, သူတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကိုအနည်းဆုံး $ 297 တန်ဖိုးရှိများမှာ ...
ငါကယနေ့သင်တို့ကိုပိုကောင်းတဲ့သဘောတူညီချက်ကတိထားတော်ကြောင့်ဘယ်အာလဖ Shape ... နောက်ကျောကိုရောက်စေဖို့တစ်မစ်ရှင်အပေါ်ပေါ့ ... ပြီးတော့ကိုယ်ကအဓိပ်ပာယျ ...
ယနေ့တွင်သင်တို့သည်ပင် $ 147 ၏လွန်ကဲကဲလျှော့စျေးနှုန်းဆပ်ဖို့မသွားပါတယ် ...
သင်သာဒီနေ့ရဲ့အထူးကန့်သတ်အချိန်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုမှတဆင့်အမိန့်လိုက်တဲ့အခါ ... သင်ဟာသာ $ 37 တစ်ဦးတည်းအချိန်တစ်ခုတည်းလုံခြုံငွေပေးချေမှုများအတွက်အရာရာမှချက်ချင်း access ကိုရင့် ...
သငျသညျရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပါပဲလျှင်ယခု, သငျသညျအရာခပ်သိမ်းအဘို့ဤသေးငယ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသင်ပင်အလုပ်လုပ်မဖြည့်စွက်တိုးမြှင်ထင် testosterone ဟော်မုန်း၏တစ်ခုတည်းပုလင်းများအတွက်ပေးဆောင်ချင်ပါတယ်အဘယျသို့ပင်ထက်ဝက်မကနားလည်သဘောပေါက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ...
ငါသည်သင်တို့ကိုအထူးအော်ပရေတာများနှင့် SpecForce Alpha ကိုအသုံးပြုကြသူအရပ်သားလူထောင်ပေါင်းများစွာအဖြစ်အလားတူဦးခေါင်း-လှည့်ရလဒ်တွေကိုမျှော်လင့်နိုင်ပဲကြီးကျယ်ခမ်းနားသည့်ရလဒ်များကိုကတိပေးမည်မဟုတ် ... သူတို့ကိုငါအာမခံပါလိမ့်မယ်သိသောကြောင့် ...
သင်ပိုမိုရော့ခ်-ခက်, ပိန်ကြွက်သားထုထည်ပေါ်တွင်တင်မထားဘူးဆိုရင်သင်သည်အစဉ်အမြဲမျှော်လင့်ပါတယ်ထက် ...
သငျသညျသိသာသည်သင်၏စို့ ABS နှင့်သတ်မှတ်ထားသောလက်နက်ထုတ်ဖေါ်ဖို့အဆီဝေးအဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်မထားဘူးဆိုရင် ...
သငျသညျအမြိုးသမီးမြားကိုပိုငျသညျမှရေးဆွဲလျက်ရှိသောကိုမြင်လျှင်မစတင်ပါဘူး, လူအသစ်ရဲ့အာလဖ status ကိုမှလိုက်လျောဟန်ပါလျှင် ...
သင်ကိုယ်တိုင်များအတွက်တုန်လှုပ်ဖွယ်အာလဖ Shape Effect ™တွေ့ကြုံခံစားကြဘူးလျှင်တိုတောင်းခုနှစ်တွင်, ရိုးရိုးလာမည့်ရက်ပေါင်း 60 အတွင်းအချိန်မရွေးငါ့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့, ငါချက်ချင်းသင်တစ်ဦးကို 100% ပြန်အမ်းငွေထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ငါလုံးဝသံ-ဝတ် 100% ပြန်ပိုက်ဆံအာမခံချက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကာကွယ်ပေးချင်တယ် ...
ငါအော်ပရေတာအဖြစ်သင်ယူင့်အရာတစ်ခုမှာ ... သင့်ရဲ့စကားလုံးသင့်ရဲ့နှောင်ကြိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကအခုအချိန်မှာဆုံးဖြတ်ရန်မလိုပါ။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏ခြွင်းချက်မရှိအာမခံ၏အားသာချက်ယူ 100% ယုံကြည်မှုရှိနိုင်ပါသည် ...
ရုံတရားမျှတသော ... ... အပြည့်အဝ 60 နေ့ရက်ကာလအဘို့ SpecForce အာလဖကွိုးစားတစုံအန္တရာယ်မရှိဘဲကိုယ်အဘို့ရလဒ်ကိုတွေ့မြင်?
သို့သျောလညျး $ 77,95 မှာတန်ဖိုးထားတဦးတည်းကိုပိုပြီးအလွန်အထူးကန့်သတ်အချိန်စူပါအပိုဆုငါဒီနေ့သင်စတင်ရန်တဲ့အခါမှာအခမဲ့သင်တို့ဆီသို့မရရှိနိုင်စေချင်ကြောင်း, အဲဒီမှာရဲ့ ...
ဒါဟာအဆိုပါ Alpha-အခြေအနေလက်စွဲစာအုပ်ကိုခေါ်မယ့် ...
အခြေခံအားဖြင့်, ဒီအသစ်ရဲ့အာလဖ Shape Effect အထူး status ကိုလက်ခံရန်သင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလမ်းညွှန်သည် ...
သငျသညျချက်ချင်း 15% ပိုပြီးအစွမ်းထက်နှင့်ပုလ်ကြည့်ဖို့ 10 စက္ကန့်အနက်ရောင် ops လှည့်ကွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ် ...
သင်သည်မည်သည့်အခန်း၏ Focal Point သည်စေသည်အဆိုပါကိုယ်ပျောက်အတွေးအခေါ်ပြောင်းကုန်ပြီ ...
ခိုင်မြဲစွာမဆိုအုပ်စုတစ်စု၌သင်တို့၏အာလဖ status ကို anchors သောမေ့လျော့လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှု ...
သင့်ရဲ့အာလဖအမျိုးသားကြီးစိုး solidifies သောစကားပြောဆိုမှု technique ကို ...
ဤသူသည်သင်တို့ကိုကျော် $ 370 မှယနေ့ SpecForce အာလဖနှင့်အတူလက်ခံရရှိနေတစ်ယောက်တည်းဆုကြေးငွေစုစုပေါင်းတန်ဖိုးကိုဆောင်တတ်၏ ...
သို့သျောလညျးသငျသညျအရာခပ်သိမ်းမှချက်ချင်း access ကိုလက်ခံရရှိပါတယ် - ထို SpecForce အာလဖစနစ်က ... အဆိုပါ 7-Day ကို testosterone ဖြေရှင်းချက်အပါအဝင် ... The Black Ops MacroFlex အစားအသောက် App ကို ... ပေါင်းအလွန်အမင်းကန့်သတ်အချိန်စူပါအပိုဆုက The Alpha-အခြေအနေလက်စွဲစာအုပ် ...
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလှည်းခလုတ်ကိုဖို့ add နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖွင့် $ 37 အဘို့အ ...
ကိုသတိရပါ, သငျသညျယခုတိုင်အောင်တက်ပြုသောအမှုဖွင့်ဘာမျှမသင်ရထိုက်သည့်ဝမ်းခွဲ, ကျောက်ခက်အာလဖအမျိုးသားကောင်အားပေးတော်မူပြီ, ယခုသငျသညျအဘယျကွောငျ့သိကြ ...
တဖန်သင်တို့တစ်လမ်းဆုံကဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျစိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်တင်သွင်းခဲ့တဲ့၏တူညီသောလမ်းကြောင်းလမ်းလျှောက်စောင့်ရှောက်ရန်ဆန္ဒရှိပါသလား? ...
သင်သည်သင်၏အသက်တာ၏အကောင်းဆုံးအနှစ်အစဉ်အဆက်သင်၏အသားဦးအရာကိုသောဝမ်းခွဲ, ကျောက်ခက်အာလဖအမျိုးသားကောင်နှင့်အတူကြွလာသောအဆင့်အတန်းနှင့်အကြည်ညိုလေးစားမှုကိုခံစားခြင်းမရှိဘဲ, အားဖြင့်ပျံသန်းစောင့်ကြည့်ပါလိမ့်မယ် ...
ဤသူသည်ငါသင်တို့အဘို့အလိုခငျြသောအရာကိုမဟုတျပါဘူး ... ထိုအခါငါကသငျသညျကိုယျအဘို့အလိုရှိကြသည်တွင်အဘယ်အရာကိုမရင့်ကိုသိ ...
ထိုသို့သမိုင်းကြောင်းတွင်တိုင်းအာလဖအမျိုးသားကိုသူကသိတယ်ဖြစ်စေ, လုပ်သို့မဟုတ်မရှိသေးပေရွေးချယ်မှုရဲ့အ ...
ဒါဟာကျနော်တို့အထူးတပ်ဖွဲ့များအတွက်အစောပိုင်းလေ့လာသင်ယူလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖွင့် - လုံခြုံတဲ့အမြင့် Value ကိုပစ်မှတ် ...
အဘယ်သူမျှမကပို BS ... မှား tools များနှင့်အတူမှားရည်မှန်းချက်များတှဲဖကျ ...
သင်သည်သင်၏အသက်တာ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူအကြောင်းကိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်အာလဖအခန်းကဏ္ဍသို့ခြေလှမ်းထိုက်ဖြစ်ကြောင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်သင့်ပတ်လည်လူတိုင်းသက်သေပြ ...
Sun ကဇူး - သမိုင်း၌အကြီးမြတ်ဆုံးစစ်ရေးဗျူဟာတွေထဲက - ကိုဖျောပွ ...
"အောင်ပွဲခံသူရဲရှုံးသူရဲပထမဦးဆုံးအစစ်ကိုသွား, ပြီးတော့အနိုင်ရရှာနေစဉ်, စစ်တိုက်သွားပြီးရင်ပထမဦးဆုံးအနိုင်ရပါ။ "
SpecForce အာလဖပြန်သင်ကိုင်ဆောင်ထားပြီးအရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေး ...
အပြည့်အဝ ... စစ်တိုက်သွားရန်သင့်အားပြင်ဆင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုယ်အဘို့အအာလဖ Shape Effect သိမ်းယူခဲ့လျှင် ...
နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်တွေ့ပါဒီနေ့ရဲ့ကန့်သတ်အချိန်စျေးနှုန်းအစဉ်အမြဲသွားပြီ, ငါ့စူပါအပိုဆုမရှိတော့ရရှိနိုင်မနေပါနဲ့ ...
က Man တက်, ယခုအရေးယူ ...
ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးအတွင်းပိုင်းပေါ်မှာငါ့ကို join ...
သူတို့ရဲ့အာလဖအခြေအနေနှုတ်ဆက်ပြီးရှိသည်ဟုနှင့်အိပ်မက်နေထိုင်နေကြသူလူတို့သညျ join ...
အမြဲအဖြစ် ... အပြင်ရပ်!
သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း Tactical ကြံ့ခိုင်ရေးတဲ့ Expert